एउटा सामान्य आग्रह थियो त्यो, जसको मैले अति नै असामान्य जवाफ पाएको थिएँ । इतिहास नभैसकेको अस्ति भर्खरको सन्दर्भ हो त्यो । गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्था जस्ता संगठनहरूमा लोकतान्त्रिक मात्र नभै सृजनशील अभ्यासहरूलाई आत्मसाथ गरिनुपर्छ भन्ने मेरो ठनाई हो । त्यसैकारण, मैले मेरो सामान्य बुझाई सामाजिक सञ्जालमा राखेको थिएँ - को नयाँ ? को पुराना ? जोसँग ‘नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता मसँग छ’ भन्ने आत्मविश्वास छ भने त्यो जोसुकै होस् लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएर नेतृत्वमा आउने अवसर उसले पनि पाउनुपर्छ । के आफ्नो आत्मविश्वासको परख गर्न नपाउने उसले? म आफू भुँइमान्छे भन्ठान्छु, त्यसैले मेरा बुझाईहरूमा सिमितता छन् भन्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन । तर म भुँइमान्छेको भुँइप्रश्नको जवाफ एक जिम्मेवार ब्यक्तिले गैरजिम्मेवार तरिकाले दिएको भान भएपछि, मैले यो ब्लग लेख्दैछु । मेरो नेपाली भाषाको सम्प्रेषणमा मित्रको अंग्रेजी भाषामा जवाफ पाएपछि, अंग्रेजी साहित्यमा आफू अध्ययनरत क्याम्पसको सर्वोत्कृष्ट नतिजासहित स्नातक गरेको मेरो अहम रन्थियो नै, मैले अंग्रेजी जवाफको लागि मित्रलाई अंग्रेजीमा नै जवाफ फर्काइसकेको छु । तर त्यसले मात्र धित मरेन । माफ गर्नुहोला ।
गैआनेसं फिनल्याण्डको जिम्मेवार पद सम्हालिसक्नु भएका मित्रलाई Intelligent हुनू भनेको अंग्रेजी भाषामा हल्काफुल्का ज्ञान राख्नु भन्ने वैरागलाग्दो भान परेजस्तो लागेपछि, मलाई यत्ति चाँहि भन्नु मन लाग्यो कि यो अंग्रेजी शब्दको मुल ल्याटिन शब्दको खास अर्थ Understanding हो, जसको नेपालीमा अर्थ हुन आउँछ - बुझ्नु । अब कति चाँहि विदेशिएका नेपालीहरू होलान जसले गैर आवासीय नेपाली संघको बारे नबुझेका होउन ? अझ, फिनल्याण्डको सन्दर्भमा यस्तो संख्या कति होला ? खैर यस बिषयमा धेरै टाउको नदुखाउ होला । तर महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि अहिलेसम्म कति फिनल्याण्डबासी नेपालीहरू मेरा मित्रको सक्षम वा योग्य ब्यक्तिको परिभाषाभित्र अटाउन सकिएन होला । वा तपाइँ हामी कति जना त्यस्ता अयोग्यहरू छौं होला, जुन मेरो मित्रलाई लागिरहेछ ?
म यसो गम खान्छु, मेरा मित्रजस्ता क्षमतावान व्यक्तित्वहरूले अटसमटस भएको गौरवशाली संस्थाको किन यस्तो कन्तविजोग भएको होला ? जुन संस्थाको नाम लिदाँ अधिकांश नेपालीहरू नाक थुन्छन ? मानौं कि मैले एनआरएनए भन्दा एकैपटक मेरो मुखबाट मरेको मुसाको दुर्गन्ध मिसिएको श्वास अनि चाकबाट १०० प्रतिशत नै हाइड्रोजन सल्फाइड भएको अपानवायू निस्किएको छ । त्यस्तो अवस्था ल्याउने संस्थाभित्र बस्नुभएका खास खास इन्टेलिजेन्टहरूको कारण हो या बाहिर बसेका हामीजस्ता अयोग्यहरूको कारण ? म त्यसै त्यसै गम खान्छु । अझ हास्यास्पद कुरा त विद्वान नै विद्वानले भरिएको संस्थाका ब्यक्तिहरूले संस्थाकै विधान अध्ययन गर्नु हुँदो रहेनछ । चंगाचेटमा चंगा उडाउन गएका युवा विधार्थीहरूलाई जिम्मेवार पदाधिकारीले नै विधार्थीहरूले पनि भोट (मत) खसाल्न पाउँछ भनेको खबर मेरा कानमा परेका दिनदेखि म त्यसै त्यसै वैरागिएको छु । अनि भन्न मन लाग्छ, कठै तिम्रा विद्वता ! तिम्रा योग्यता !
संस्था यान्त्रिक नहोला, म पूर्ण यान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने पनि ठान्दिनँ । उसो त संस्था पूर्ण भावनात्मक पनि हुँदैन होला नी ? संस्थाको सुधार तथा विकासका बारे कुरा उठाउँदा मित्रहरू सधैं भन्ने गर्नुहुन्छ, 'हामी कामकाजी मान्छेहरू पनि हो, हामीले फुर्सदमा संस्थालाई समय दिएका छौं । जे जति गर्न सकेका छौं, त्यसका लागि हामीप्रति आभारी हुने गर्नुस ।' अत्यन्तै भावनात्मक कुरा झिकेर, संस्थाको कार्यकारी पदमा रहेर आफूले निर्वाह गर्न नसकेको कर्तव्यप्रति लज्जाबोध गर्ने कि अनुग्रहित हुन अरूलाई आग्रह गर्ने ? यसो भन्दै गर्दा, संस्थामा रहेर जे जति गर्न सक्नुभएको छ, त्यसका लागि यहाँहरूप्रति म कृतज्ञता नरही रहन सक्दिनँ । तरपनि के यहाँहरूका प्रयासहरू पर्याप्त थिए त ? छन ? प्रश्न गर्न पाइने कि नपाइने ? भुँइमान्छेहरूका प्रश्नहरू आउँदा नहडबडाउनुस् मित्रहरू, तर भुँइका प्रश्नहरूको जवाफ आकाशमा खोजेर पाइँदैन, यति त बुझिदिनुस् । यति त मानिदिनुस् कि तपाइँहरू कसैलाई पनि आज प्रश्न गर्ने कसैले पनि जोरजबस्ती गरेर संस्थामा पठाएका त थिएनन । जो जो जानुभो, आफ्नै मर्जिले पुग्नु भो । र, यो पनि मानिदिनुस्, कि संस्थामा फुर्सदको समय उपयोग गर्न हैन, संस्थाको आवश्यकता अनुसार फुर्सद निकालेर पुग्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, विधानमा भएका अप्ठ्यारा गाँठाहरूलाई फुकाउन सामूहिक प्रयास गर्ने वातावरण मिलाउनुस । कम्तिमा पनि एकपटक आफ्ना अपार विद्वताका बाबजुद भएका तमाम प्राविधिक एवं व्यवहारिक गल्तिहरूका लागि संस्थागत क्षमायाचना गर्नुस् । संस्थालाई दुईचार मान्छेहरूको गफ्फा लगाउने अड्डाभन्दा माथि उठाएर फिनल्याण्डमा रहेका नेपालीहरू चाहे ति कुक या क्लिनर हुन, ड्राइभर या डाक्टर हुन, लेक्चरर वा लेखक हुन, विधार्थी वा विशेषज्ञ हुन यी सम्पूर्णका लागि भरलाग्दो मञ्चका रूपमा विकास गरौं । प्रश्नसँग डराएर हैन, उत्तर दिन जिम्मेवार भएर अगाडि आउने साहससहित अधिकांशसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने साहस भएको जिम्मेवार नेतृत्वको खोजीमा म मात्र हैन धेरैजसो नेपालीहरू अझै पनि उहि आकाशमुनि श्वास फेरिरहेका छौं । हामीलाई मरेका लाशहरू नठानिदिनुस् हजुर ।